မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့သော – PoemsCorner
သူနဲ့ကျွန်မ စတင်တွေ့ဆုံပီး ထူးဆန်းစွာ ချစ်ခဲ့ကြတယ်……….. ဒါပေမဲ့ကျွန်မ တို့နှစ်ယောက်လုံးကြားမှာချစ်စိတ်ကလွဲပီးဘာမှမရှိပါဘူး။။
သူ့နဲ့ကျွန်မ ဘာကိုမှ မျှော်လင့်လို့မရဘူး.။။
ကျွန်မ နဲ့ သူ့ ကြား မှာ အနာဂတ်ဆိုတာလဲမရှိဘူး။။။။။။။။။။။
ဘာကိုမှလဲ ဆုပ်ကိုင်ထားလို့မရ ……………. ကျွန်မရဲ့အချစ်တွေကိုသီကုံးစရာကြိုးလဲမရှိ……… လက်ရှိဘ၀မှာ ကြုံနေရတဲ့အချစ်ကလဲမသေချာ………. တချိန်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကိုမဆိုထားနဲ့ လက်ရှိမှာလဲ သူ့ဘေးနားကအဖော်ကောင်းလဲဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ကျွန်မက သူ့ကို တည်မြဲသန့်ရှင်း တဲ့အချစ်တွေနဲ့ချစ်နေမ်တယ်……..
ဒါကြောင့်စာရေးဆရာမ ဂျုးကပြောတာပေ့ါ အချစ်ဆိုတာ ကြိုးနဲ့သီဖို့မလိုတဲ့ ပန်းပွင့်လေးပါမောင်ရယ် တဲ့………….
ဒါပေမဲ့ကျွန်မမှာ ဆန္ဒတွေတော့ရှိတယ်…….. မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိပါဘူးကွယ်……………..
In: ကဗျာ Posted By: May Kha Date: Oct 17, 2010
Leave comment 8 Comments & 607 views
တကယ်တော အချစ်ဆို ချစ်နေရုံလေးပါပဲ…….
By: nyimalay at Oct 21, 2010
ဆန္ဒရှိရက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ဘ၀က တစ်ကယ်ကိုဆိုးဝါးပါတယ် …….
By: ယုန်လေး at Oct 22, 2010
ဆန္ဒတွေတော့ရှိတယ်…….. မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိပါဘူးကွယ်…………. 🙁
By: aye thaw thaw at Nov 22, 2010
phit tat par dal 🙂
By: thinzar nwe at Jan 10, 2011
By: ma at Jan 10, 2011
By: jenny at Jan 10, 2011
ဒါပေမဲ့ကျွန်မမှာ ဆန္ဒတွေတော့ရှိတယ်…….. မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိပါဘူးကွယ်…………….. ။။။
By: ei lay at Jul 24, 2011